Macallimiinta “Aada Dugsiyada” Oo Shaqo Joojin Ka Sameeyey Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Macalimiinta ka shaqeeya Mashruuca “Aada Dugsiyada” ee ay waddo wasaaradda arrimaha bulshada dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay shaqo joojin, waxeyna isugu baxeen qaar iyaga ka mid ah Afaafka hore ee Misaajidka Isbaheysiga ee Magaalada Muqdisho.
Afhayeen u hadlay macallimiinta Mashruuca “Aada Dugsiyada” oo lagu magacaabo Maxamed Amiin ayaa warbaahinta u sheegay ineysa dhowr bilood helin wax mushaar ah, taasoo keentay iney shaqada wedi waayaan.
Wuxuu sheegay Maxamed Amiin in horay loogu ballan qaaday in bil kasta la siinayo $200 dollar hase ahaaten tan iyo bishii August oo ay shaqeeyeen ay heeleen bil iyo bar mushaar ah oo u dhiganta $300 oo kaliya.
Macalimiinta shaqo joojinta sameeyey oo gaarayey ilaa 50 macalimiin aya waxay sheegeen in Wasaarada Adeega Bulshada ay u direen codsiyo ku aadan in la siiyo mushaaraadkii loo ballan qaaday, hase ahaatee ay waayeen wax tixgelin ah, taasoo ku kaliftay iney shaqada ka fariistaan.
Waxey sheegeen Macallimiintu ineysan shaqada ku laaban doonin ilaa laga siiyo mushaaraadka ka maqan, islamarkaana wasaaraddu ka fulineyso heshiiskii lala galay macallimiinta.
Mashruuca “Aada Dugsiyada” ayaa sanad dugsiyeedka socda ee 2013 -2014 laga bilaabay gobolka Banaadir, waxaana dowladdu shaqo gelisay Iskuulo dhowr ah oo ay lahyed dowladda Soomaaliyeed.
Masgruucaan waxaaka faa’iideysta arday farabadan oo sabool ah, waxaana loogu talagalay inaan ardayda laga qaadin wax lacag ah, hase ahaatee macallimiinta ayaa ka cabanaya in dowladda Soomaaliya aysan suuragelineyn in carruurta saboolka ay sii wataan waxbarashada, maadaama macallimiintii wax u dhigayey aan la siineyn mushaarkii lagula heshiiyey.